Duta-taa’aan ADWUI yokaan EHADEG haaraan – Dr. Abiyyi Ahimed, Wixata dhufu kana ganama, muummicha-ministarummaaf Paarlaamaa biyyattii duratti kan kakuu fudhatanii fi uummata Itiyoophiyaaf haasawa godhan tahuun himamee jira. Hooggana DHDUO fi miseensota Mana-maree ADWUIn kan amantaan irra kaayamee jiru – Dr. Abiyyi dura kanneen dhaabatan danqaalee fi abdiiwwan egeree yaadawwan adda addaa kaasaaa jiran.
Maddeen paartichaa, Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti, kan Wixata dhufu kana geggeessamu – ajandaan walga’ii addaa paarlaamaa biyyattii waa’eedhuma kakuu raaw’achuu fi taayitaa wal-harkaa fuudhuu ti – jedha – gabaasaan keenya – Eskindir Firew, Finfinnee irraa. Kakuu sanaa booda kan Muummicha-ministaraa jedhamuuf jiran – Dr. Abiyyi, uummata biyyattiif akka haasawa gochuuf jiran tu eegama. Yeroo sanatti, waa’ee kaayyoo siyaasaa hoogganaa haarawa kanaa fi karoorsa isaan biyyaaf qaban mallattoo wayyaawaa argachuun ni danda’ama – jedha – gabaasaan keenya.
Umuriin isaanii jalqaba afurtamootaa ka tahe – Dr. Abiyi gara taayitaa ol’aanaa kanatti ka dhufan sadarkaa sadarkaadhaani. Eega DHDUOn hundeessamee jalqabee – miseensummaa dhaabichaan ka turan – Dr. Abiyyi, dhaabichaan gara waraanaatti ramadamuun isaanii itti-gaafatama isaanii jalqabaa akka tahe ragaaleen ni agarsiisu. Tar-muuda waraanaa, koloneelummaas ni qaban. Gabaabaatti INSA jedhamuun kan beekamu – ajensii odeeffannoo tika-nagaa biyyoolessaa yaadaa fi wixinee yaada hundeessama isaa dhiheessuu fi hojii irra oolchuun qooda fudhachuun isaaniis himamee jira.
Ministara Saayinsii fi Teknooloojii ta’uudhaan yeroo gabaabaa keessatti ba’iin gaariin agarsiisan, madaalii dandeettii hoogganaa isaanii akka tahe kanneen dubbatanis ni jiran. Dubbi-himaan paartii isaanii, kan DHDUO – Obbo Kaasahun Gofee kanneen keessaa tokko.
Jireenyi isaanii dhuunfaatiin, abbaa-warraa, abbaa ijoollee lamaa fi amanaa amantii kiristaanaa prootestaantii ti – Dr. Abiyyi Ahimed. Kan umurii dargaggummaa keessa jiran – namni kun, amma itti gaafatama biyyoolessaa fudhachuuf qophaawanii jiran. Itti-gaafatama haaraa kanaan yeroon itti madaalamanis gahee jira.
Maddeen adda addaa akka ibsanitti, deemsawwan turanis akka mirkaneessanitti, paartiin isaanii DHDUOn, itti gaafatama kanaaf eega amantii irraa kaawwatee tureera. Isaan dura, dura-taa’aa DHDUO KA turan – Obbo Lammaa Magarsaa, itti-gaafatama sana gara Dr. Abiyyitti dabarsanii gara dura-teessummaa itti-aanaatti gad-bu’an.
Mana-maree ADWUI yokaan EHADEG keessattis dura-teessummaa paartichaa fi muumicha-ministarummaaf filannoo geggeessame irratti kan maqaa Dr. Abiyyi kennan Obbo Lammaa Magarsaa tahuu, maddeen paartichaa gabaasaa keenyatti himanii jiran. DHDUO qofaan otuu hin taane dhaabbatoota miseensota EHADEG keessaa sagalee argatanii filatamuun isaanii ammoo, paarticha gamtaa keessatti amantaan irra kaayamuu isaa agarsiisa – jedha – gabaasaan keenya.
Kan isaan dura turan – Muummichi-ministaraa Hayile-maariyaam Dessalenyi illee akka Dr. Abiyyi filataman fedhuu isaanii, maddeen kun gabaasaa keenyaaf ibsanii jiran.
Obbo Hayile-maariyaam taayitaa isaanii gad-lakkisuuf murteessuun isaanii, rakkoo biyyattii mudatee jiruuf qaama furmaataa ta’uun fedha, jechuun akka tahe ni yaadatama.
Filatamuun Dr. Abiyyi, bulchiinsa naannoo mormiin itti heddummaatee jiru – Oromiyaa kan bakka-bu’an waan taheef akka tahetti kanneen dubbatan ni jiran.
Tasagabii dhabinsa jiruu fi rakkoo siyaasaa biyyattii keessaaf furmaata tahu – ilaalcha jedhuun.
Yunivarsitii Finfinneetti, barsiisaa barnoota siyaasaa fi hariiroo sadarkqaa Addunyaa ka tahan – Profeser Kaasahun Birhaanuu yaada boodaa kanatti walii hin galan. “Filatamuun Dr. Abiyyi, jijjiiramaaf nama qophaa’ani” yaada jedhu irraa akka tahe dubbatu.
Guutummaa gabaasichaa dhaggeeffadhaa
Dr. Abiyyi Ahimed Wixata, Ebla 2, 2018 Kakatanii Muummicha Ministaraa Tahan